एक किलो चियाको मूल्य ३५ हजार ! – नेपाली सूर्य
September 18, 2019 Nepali SuryaLeaveaComment on एक किलो चियाको मूल्य ३५ हजार !
यहाँका कारखानामा चिया प्रशोधन गरिन्छ र तयारी चियाका रूपमा बजारमा पु¥याइन्छ । यो तयारी चियाको मूल्य कति हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले अनुमान गर्नसमेत गाह्रो हुन्छ । कुनै चिया यतिसम्म महङ्गो हुन्छ कि जो कोही स्वदेशी ग्राहकले किन्नसमेत सक्दैनन् । इलामको जस्बीरे टी प्रशोधन उद्योगमा बन्ने एक प्रकारको चियालाई किलोकै रु ३५ हजारसम्म पर्छ |
उनका अनुसार यो चिया बनाउनका लागि पनि निक्कै मेहनत लाग्छ । उज्यालो/अँध्यारो, प्रकाश र ताप मिलाएर निर्माण गर्न सकिने यो चिया अत्यन्तै कष्टपूर्ण तरिकाले बनाउनुपर्दा मूल्यसमेत महङ्गो परेको सुब्बाको भनाइ छ । “यो चिया नेपालमा त बिक्री हुँदै हुँदैन । यो चियालाई अत्यन्तै मेहनत गरेर हामीले हातले बनाइन्छ ।” उनले उक्त चिया स्वास्थ्यका लागि पनि फाइदा हुने भएकाले पनि विदेशमा माग बढी रहेको बताए ।
अविरल वर्षाले नेपालगञ्ज डुबानमा, न्यूरोडका पसल जलमग्न
अन्तरिक्षमा जान लागेका बेजोसलाई पृथ्वीमा फर्किन नदिन ५६ हजार बढीको हस्ताक्षर
January 2, 2022 Nepali Surya
January 13, 2022 January 13, 2022 Nepali Surya